माडी महोत्सवको पारदर्शी हिसाबकिताब खोइ ? | चितवन पोष्ट दैनिक
माडी महोत्सवको पारदर्शी हिसाबकिताब खोइ ?
२०७० चैत्र १०, सोमबार ०२:३२ गते
पहिलो माडी महोत्सव सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । आममाडीवासी र गैरमाडीवासीलाई आय–व्ययको विवरण जानकारी गराउनु पर्ने हो कि होइन ? कसै–कसैको लहडमा लागेर गरिएको महोत्सव सकिएको १ महिना नबित्दैदेखि धेरै माडीवासीहरुले महोत्सवको औचित्यमाथि औँला ठडाउन सुरू गरिसकेका थिए । माडी महोत्सव गर्नु आवश्यक थियो, तर त्यसको लागि पनि उपयुक्त समय र उपयुक्त नेतृत्वको खाँचो थियो । माडी महोत्सवले माडीवासीको भावनामा ठेस पु¥याएकै हो, चाहे त्यसलाई स्वीकार गरौँ वा नगरौँ । माडी महोत्सवले एउटा इतिहास पनि गुमाएकै हो । जंगलमा सीमा मिचिएको देख्ने एमाओवादीले आफ्नै आँगनमा इतिहास मिचिएको पत्तै पाएन । लहैलहैमा नै बित्यो प्रथम माडी महोत्सव ।
माडी महोत्सव असफल भयो भन्दै गर्दा पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई टाउको दुखाइ हुन सक्छ । किनकि, उनीहरुले माडी महोत्सवको विषयलाई सुरूदेखि नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आइरहेका छन् । मानौँ उनीहरु माडी महोत्सव असफल हुनु भनेको आप्mनै पार्टी पनि असफल भएको हो भनेझैँ गरी सोचिरहेका छन् । चितवन क्षेत्र नं. ५ मा माननीय विक्रम पाण्डेले जित्नु संयोग मात्र होइन, यो त माडीभित्र र माडीबाहिरका राजनीतिक पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताको क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब पनि हो । धेरै नेता÷कार्यकर्ता चुनावको समयमा पनि सबै जनताको घरदैलोमा पुग्न भ्याएनन् र भ्याइँदैन पनि । तर, रेवा नदीमाथि बनेको पुल माडी महोत्सवका लागि भन्दै प्रकिया नपु¥याई सञ्चालनमा ल्याउँदै गर्दा बजेका र बजाइएका रेडियोका समाचार र सामग्रीहरुले माननीय विक्रम पाण्डेलाई प्रत्येक माडीवासीको मनमा नै पु¥याइदियो, फलतः परिणाम पनि हात पारिदियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नै कदमले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएझैँ माडीका नेताको आफ्नै गलत निर्णयले माननीय विक्रम पाण्डेलाई राजनीतिक फाइदा पुग्न गयो ।
हुन त, माडी महोत्सवको बहानामा कतिले आप्mना व्यवसाय स्थापना गरे, कतिले आप्mनो व्यवसाय स्थापित पनि गरे । तर, त्यसले पनि दीर्घ लाभ दिन सकेन र लाभ पनि लाभ नभएर हानिमा परिणत भयो । माडी महोत्सवको प्रभाव महसुुस गर्न धेरै समय पर्खिनु परेन, माडीका नेताहरुलाई । राजनीतिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा उद्घाटन सत्रमै पहिलो झापड खाएका कांग्रस र एमालेले फेरि दोस्रो झापड संविधानसभाको चुनावमा खानु प¥यो । दोस्रो संविधानसभा चुनावको परिणाममा माडी महोत्सवको सबैभन्दा बढी प्रभाव छ । माडी महोत्सवका लागि भनेर रेवामाथिको पुल प्रक्रिया नपु¥याई सञ्चालनमा आउँदै गर्दा त्यसको अधिकतम फाइदा माननीय विक्रम पाण्डेलाई र त्यसको अधिकतम घाटा एमालेको भागमा पर्न गयो । यो मतपरिणामले ल्याएको यथार्थ हो । माडी महोत्सवले क्षेत्र नं. ५ को राजनीतिक डिसकोर्सं नै परिवर्तन गरिदिएको मान्न सकिन्छ । पार्टीगत रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा कस–कसलाई नाफा वा घाटा भयो भन्दा पनि माडी महोत्सवले समग्रमा नाफाभन्दा घाटा नै दिएर गयो । महोत्सवको जुठो चाटेकाहरुलाई यो कुरा अप्रिय र असत्य पनि लाग्न सक्ला, अनि तिनका आँखाले यस्तो कुरा गर्नेहरुलाई प्रतिक्रियावादी पनि देख्न सक्लान् । तर, यदि तपाईंले बारीमा वा गोठमा काम गर्दै गरेको एउटा माडीवासी किसानलाई सोध्नुभयो भने यथार्थ यही पाउनुहुनेछ ।
माडीले लामो समय राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै गर्दा पनि माडीले अझै नेता जन्माउन सकेको रहेनछ । हामीले कुरा राख्यौँ– यो एउटा मेला हो, मेलाको संयोजक बन्ने हैसियत माडीवासीमा नै छ, बाहिरबाट नखोजौँ तर त्यसो हुन सकेन । प्रथम माडी महोत्सव भनेर गर्व गर्ने ठाउँ नै रहेन । भन्नलाई ऐतिहासिक प्रथम माडी महोत्सव भनियो, तर संयोजक भने खोजेर गैरमाडीवासीलाई बनाइयो । माडी महोत्सवले माडीमा कुनै मह¤वपूर्ण प्रभाव छाड्न सकेन । बरू, माडीवासीले दुःखले जोगाइराखेको दुई–चार सय दाम रित्ताएर गयो । पैसा कि त पटनाको बिहारीले कमायो, कि त काठमाडौँको माडेले कमायो ! बस् यत्तिमै माडी महोत्सव सकियो ।
माडी महोत्सव गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी हानि एसएलसिका विद्यार्थीलाई पर्न गयो । कमजोर परीक्षाफलले त्यसलाई तीन महिनामै पुष्टि गरिदियो । माडी महोत्सव धेरैले अवलोकन गरे, यो सर्वत्र खुशीको कुरा हो । तर, माडी महोत्सवलाई नै माध्यम बनाएर सीमित व्यक्तिले जुन अनुचित फाइदा लिए र अझै पनि लिन खोज्दैछन्, त्यो भने सर्वत्र निन्दाको विषय हो । माडी महोत्सवको पारदर्शी हिसाबकिताब अहिलेसम्म बाहिर आउन नसक्नुको मुख्य कारण पनि भागबन्डा नमिल्नु नै हुन सक्छ । होइन भने, पन्ध्र दिनभित्र आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका व्यक्तिहरु पन्ध्र महिना बित्दा समेत किन मौन छन् त ? हात्तीले भत्काएको घर बनाउन काठ नदिने त्यही सामुदायिक वन मेलाको ऋण तिर्ने बहानामा लाखौँ मूल्यको काठ कटानी गर्नका लागि तयार थियो । धन्न हामीले बेलैमा थाहा पायौँ र रोक्ने प्रयास ग¥यौँ । थाहा छैन, रोक्न सफल भयौँ वा भएनौँ । माडी महोत्सव घाटामा नै हो भने पनि त्यसको खर्च र आम्दानी थाहा पाउने अधिकार हामीलाई छ कि छैन ? कि संयोजक र पार्टी नेता मिलेपछि जे गरे पनि हुने हो ?
माडीका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले कस्तो व्यक्तिलाई खोजेर संयोजक बनाएछन्, जसले आफैँ संयोजक भएको एउटा मेलाको हिसाब पन्ध्र महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् ! महोत्सवका सात दिन सकिँदैमा महोत्सव सकिँदैन । यसले उठाएका हिसाब र विचारको पनि उत्तर आउनुपर्छ । आज चोक, चौरमा हिँड्दै गर्दा माडी महोत्सवको ऋण उठाउन बाँकी नै छ भन्दै गफ गर्नेहरु भेटिन्छन्, अनि महोत्सवका मालिकहरु सोचेभन्दा बढी सफल भएको हुंकार गरिरहेका हुन्छन् । त्यो बेलामा उनीहरुलाई लाग्यो, महोत्सवका सात दिन सकिए अनि हामीले जित्यौँ र महोत्सवका बारेमा फरक विचार राख्नेहरु सकिए । मानौँ, उनीहरुले सधैँका लागि जितेझैँ गरी गर्जिए । तर, आज समय बित्दै जाँदा जित्यौँ भन्नेहरु हार महसुस गर्दैछन् र सधैँका लागि हार्ने बिन्दुको नजिक पुग्दैछन् ।
माडी महोत्सवले माडीमा मानिसको बाक्लो उपस्थिति गरायो, यो सत्य कुरा हो तर त्यसबाहेक अरु कुनै एउटै उपलब्धि पाउन गाह्रो छ । माडी महोत्सवका बारेमा लुकेका पाटा धेरै छन् । संयोजकको चयन नै रूपैयाँपैसामा भएको हो भन्नेहरु पनि कम छैनन् तर जे होस्, संयोजक जसरी चयन भए पनि संयोजन राम्रोसँग गर्नुपथ्र्यो ।
सबैजसो पार्टीका माडी नेताहरु कतै न कतै भूलभूलैयामा परेकै हुन्, माडी महोत्सवको सन्दर्भमा । उनीहरुका सामु सधैँका लागि एउटा प्रश्न अगाडि आइरहने छ, के माडीमा सात दिने मेलाको संयोजन गर्न सक्ने व्यक्तित्व नभएकै हो त ? यदि होइन भने खोजेर गैरमाडीवासीलाई मेलाको संयोजक किन बनाइयो ? प्रश्न गम्भीर रुपमा खडै रहने छ । यसको जवाफ नेतृत्वले दिनैपर्छ वा भनौँ नेतृत्व कति कुरामा चुकेका हुन्, कार्यकर्ताले थाहा पाउनैपर्छ ।
अब अर्को प्रश्न यहाँनेर आउँछ, सात दिने मेलाको संयोजक हुने हैसियत नराख्नेलाई हामी कसरी नेता मान्ने ? स्वाभाविक उत्तर आउँछ, हाम्रो जस्तो देशमा कसैलाई जबरजस्त नेता नमान्नुको अर्को विकल्प पनि त छैन । माडीको बारेमा जोसँग ज्ञान छ, माडीप्रति जो इमानदार छ र जोसँग माडीका लागि केही गर्ने आँट छ, यस्ता व्यक्तिहरुलाई महोत्सवको घेराबाहिर राखेर गरिएको त्यो प्रथम माडी महोत्सव गलत थियो भन्ने इतिहास कोरिँदै गर्दा त्यससँग सम्बन्धित खलपात्रहरुले कदापि छूट पाउने छैनन् ।